Mareykanka iyo Xulafadiisa oo Weerar ku qaaday gudaha Suuriya[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Mareykanka iyo Xulafadiisa oo Weerar ku qaaday gudaha Suuriya[Sawirro]
WASHINGTON – Dowladda Mareykanka,Britain iyo Faransiiska ayaa duqeyn wadajir ah oo dhanka cirka ah ku qaaday gudaha dalka Suuriya,iyagoona uga jawaabayay subta Kiimikada ee la sheegay in dowladda Suuriya adeegsatay.
Caasimada Suuriya ee Dimishiq ayaa laga maqlay qaraxyo aad u waaweyn iyi duqeymo iyagoona ku dhow dhow magaalada Xumus.
Madaxweyne Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay weerarka ay wadajir u fuliyeen Mareykanka iyo xulafadiisa.
Waxa uu sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa ay u diyaar garoobeen tallaabooyinka ka dhanka ah dowladda Suuriya si loo joojiyo adeegsiga hubka Kiimikada ah.
Ra’iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa iyana dhankeeda sheegtay in weerarada ay ka fuliyeen Suuriya ay ahaayeen kuwo qorsheysan oo loogu tala galay in aysan xiisada gobolka sii hurin, isla markaana la iska ilaaliyay wax walba oo waxyeeleyn kara dadka rayidka.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna sheegay in weeraradan ay ahaayeen kuwo looga hortagayo in dowladda Suuriya aysan adeegsan Hubka kiimimada.
Dowladda Ruushla ayaa horay ugu hanjabtay in ay ka hortagayso gantaalada Mareykanka uu kusoo ridayo gudaha Suuriya,waxayna taasi sii xoojisay xiisadaha iyo hanjabaadaha labada dal ka soo yeerayay dhowrkii todobaad ee u dambeeyay.